Supplier Yekuchinja Simba Adapter, Shandura AC Adapter, Shandura Adapter Kubva kuChina
Tsanangudzo:36 Volt Dc Simba Adapter,36 Volt Simba Adapter,36V Dc Simba Adapter,36V Ac Simba Adapter,,
Home > Products > AC DC Simba Adapter > 36V AC DC Inoshandura Simba Adapter
Zvigadzirwa zve 36V AC DC Inoshandura Simba Adapter , isu tiri vashandi vanobva kuChina, 36 Volt Dc Simba Adapter , 36 Volt Simba Adapter vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve 36V Dc Simba Adapter R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
UK plug Wall Adapter 30V 500mA 0.5A Power Supply Adapter neEC GS  Bata Ikozvino
12V 2.5A Linear Simba Rinopihwa Adapter  Bata Ikozvino
DC Yazvino Yesimba Simba Adapter  Bata Ikozvino
48W Multi Voltage Simba Adapter Charger  Bata Ikozvino
AC DC Yepasi Pose Pasi Panogumisa Simba  Bata Ikozvino
30W AC DC Simba Anopa Adapter Bhokisi Module  Bata Ikozvino
36W Simba Adapter Ine Bhatiri Backup Supply  Bata Ikozvino
Pasi rese plugs Akadzora Simba Adapter  Bata Ikozvino
Iko 36V1A Inoshandura Simba Adapter  Bata Ikozvino
mutsara Wakagadziriswa Simba Rinopihwa  Bata Ikozvino
36v 1a Simba Adapter Inochinjisa Simba Magetsi  Bata Ikozvino
36v 0.5a 500ma Ac Dc Power Adapter  Bata Ikozvino
UK plug Wall Adapter 30V 500mA 0.5A Power Supply Adapter neEC GS
UK plug Wall Adapter 30V 500mA 0.5A Power Supply Adapter neEC GS Chikamu chidiki uye chakareruka muviri, chiri nyore kutakura kana uchifamba. Kubata zvakanyanya zvinoreva kuti magetsi adhiraivhi anogona kushanda kwenguva yakareba, SCP, OLP, OVP, OCP...
12V 2.5A Linear Simba Rinopihwa Adapter
12V 2.5A mutsara Wakagadziridzwa Simba rePasipo 12V 2.5A mutsara Wakagadziridzwa Simba rePasipo tsananguro: Iyo yekufamba simba adapta, yaimbove inopfuura nyika zana nemakumi mashanu, Zvese marudzi ePulgs. Iyo 9V 2,5A yakagadzirwa mune china adapta,...
DC Yazvino Yesimba Simba Adapter
DC Power Supply Adapter yeBhokisi Module DC Power Supply Adapter yeBhokisi Module tsananguro: Iwe unovimba nesiteti yemagetsi kupa simba mararamiro ako, uye kubhadharisa chete isn `s kuenda kuzoitema. Raja kusvika kumidziyo mitatu panguva imwechete...
48W Multi Voltage Simba Adapter Charger
48W Multi Voltage Simba Adapter Charger Tsananguro: Zvizhinji zvezvigadzirwa zveLEME zvinoda voltage ye DC yakagara kana yazvino kuti ishande zvakanaka. 12v 1.5a magetsi adapta inoda chishandiso chinogona kushandudza iri kuuya AC magetsi kune...
AC DC Yepasi Pose Pasi Panogumisa Simba
AC DC Yepasi Pese Pasi Pombi Yesimba Rinopa Tsanangudzo: Zvizhinji zvezvigadzirwa zveLEME zvinoda voltage ye DC yakagara kana yazvino kuti ishande zvakanaka. 12v 1.5a magetsi adapta inoda chishandiso chinogona kushandudza iri kuuya AC magetsi kune...
30W AC DC Simba Anopa Adapter Bhokisi Module
30W AC DC Simba Anopa Adapter Bhokisi Module Tsanangudzo: Zvizhinji zvezvigadzirwa zveLEME zvinoda voltage ye DC yakagara kana yazvino kuti ishande zvakanaka. 12v 1.5a magetsi adapta inoda chishandiso chinogona kushandura magetsi anouya e AC kune...
36W Simba Adapter Ine Bhatiri Backup Supply
36W Simba Adapter Ine Bhatiri Backup 36W Simba Adapter Ine Bhatiri Backup Tsanangudzo: T yake 16volt AC magetsi adapta ndeyekutsiva chikamu chekushandisa neSpectra S1, Spectra S2 neSpectra 9 Plus. Inoenderana neUS / EU / AU / UK zvitoro. ine nhamba...
Pasi rese plugs Akadzora Simba Adapter
12V 2.5A mutsara Wakagadziridzwa Simba rePasipo 12V 2.5A mutsara Wakagadziridzwa Simba rePasipo tsananguro: Iyo inofamba simba adapta, yaimbove inopfuura nyika zana nemakumi mashanu, Mhando dzese dzePulgs. Iyo 9V 2,5A yakagadzirwa mune china adapta,...
Iko 36V1A Inoshandura Simba Adapter
36v 1a Simba Adapter Inochinjisa Simba Magetsi 36V 1A magetsi adhidha Iyi yakanaka chaizvo 36v 1a magetsi adapta. idiki, yakapepuka uye inoshanda. Iyo inoburitswa yakagadziriswa, saka iwe unowana yakasimba 36V kusvika ku1000mA (1 Amp) yezvazvino....
mutsara Wakagadziriswa Simba Rinopihwa
12V 2.5A mutsara Wakagadziridzwa Simba rePasipo 12V 2.5A mutsara Wakagadziridzwa Simba rePasipo tsananguro: Iyo inofamba simba adapta, yaimbove inopfuura nyika zana nemakumi mashanu, Mhando dzese dzePulgs. Zviri 9V 2.5A yakaitwa China adapteri,...
36v 1a Simba Adapter Inochinjisa Simba Magetsi
36v 1a Simba Adapter Inochinjisa Simba Magetsi 36V 1A simba adhidha dhizaini: Iyi yakanaka chaizvo 36v 1a magetsi adapta. idiki, yakapepuka uye inoshanda. Iyo inoburitswa yakagadziriswa, saka iwe unowana yakasimba 36V kusvika ku1000mA (1 Amp)...
Unit Price: USD 2.36 - 3.15 / Piece/Pieces
36v 0.5a 500ma Ac Dc Power Adapter 36V 500mA simba adapta yesimba: 36V DC 500mA inoshandura magetsi magetsi ayo akagadzirirwa kusangana neV Level VI simba rekushandisa zvakanyanya Aya anotevera kuchengetedzeka maitirwo anoonekwawo pane magetsi...
China 36V AC DC Inoshandura Simba Adapter Vatengi
DC tambo inobatanidza dhayamita (d) iri 2.1mm, dhayamita (D) iri 5.5mm, ukobvu (B) ndeye 10mm. 36W magetsi adapta ehukuru: saizi yechigadzirwa: 83 * 43.5 * 39.5mm, kuchengetedza kuita, kuvimbika kwakanyanya, kuchengetedzwa kunoenderana nekushandiswa kwemazita etifiketi yekuchengetedza uye maitiro ekugadzira. anoshandiswa chaiwo emagetsi zvigadzirwa, wedunhu mabhodhi ane magetsi anopfuura, panguva yakawandisa, pfupi dunhu kuchengetedzwa. ine girini yemagetsi IC chirongwa, yakaderera simba dhizaini, simba rekushandisa simba ishoma, kushoma kupisa. zvizere mutoro wakanyanya kupisa kupisa, 100% nemaawa mana akasimbira kukwegura bvunzo, yakaderera mwero yezvakaipa.
36 Volt Dc Simba Adapter 36 Volt Simba Adapter 36V Dc Simba Adapter 36V Ac Simba Adapter 9 Volt Dc Simba Adapter